Archive du 20200513
Tafiakatra 192 ny voan’ny Covid-19 Mampivarahontsana ny any Toamasina
Olona miisa 213 no natao fitiliana ny 11 mey teo, ka 193 ny teto Antananarivo izay tsy nisy olona voa. Ny 20 kosa tany Toamasina, ka nahitana tranga vaovao 6 be izao, nampiakatra ny isa manontolo ho 192.
Ankerana Avaratra - Bongolava Tsy eken'ny vahoaka ny fanagadrana ny ben'ny tanàna
Naiditra am-ponja vonjimaika ny sabotsy 09 mey lasa teo ao amin’ny fonjaben’i Tsiroanomandidy Atoa Rabearisoa Ben'ny tanàna voafidy ao amin'ny kaominina ambanivohitra Ankerana Avaratra, Faritra Bongolava.
RMDM Toliara “Omeo fahefana feno ny Fokonolona”
Be loatra ny tsy fandriampahalemana ao atsimo ao amin’izao fotoana izao, raha ny nambaran’ny rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia na RMDM Toliara tetsy Bel’air omaly.
Antenimieran-doholona Tapitra amin`ny volana jona izao ny tetibola…
Mitaraina amin`ny tsy fananam-bola ny Antenimierandoholona amin` izao fotoana iza araka ny fanazavan` ny filohany , Rivo Rakotovao.
Raharaha "Iles Eparses" Namaly bontana avy hatrany ny Frantsay
Efa nampoizin'ny mpanara-baovao fa tsy maintsy hamaly bontana ilay fanambaran'ny filoha Rajoelina tao amin'ny France 24 sy ny RFI ny fanjakana
Fanolanana sy fibodoabana fananana teny Ivato Hiakatra fitsarana anio ny raharaha
Hiakatra fitsarana anio eny amin’ny tribonaly etsy Anosy amin’ity anio ity ilay raharaha fibodoana fananan’olona nitohy tamin’ny fanolanan-jaza nitranga teny Mandrosoa Ivato ka nampitaraina ny renim-pianakaviana isan’ny lasibatra tao anatin’izany ny 8 martsa teo
Faritra SAVA Kamiao iray tratra nitondra hazo tsy ara-dalàna
Tratran’ireo tompon’andraikitra Mitohy hatrany ny ezaka hataon’ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ireo miparitaka eny ifotony amin’ny fanaraha-maso ny
Tonga eto Iarivo ry Zoto 5 mianaka 12 000km natao herintaona…
Nigadona teto Antananarivo omaly 12 mey, ry Zoto 5 mianaka, rehefa avy namakivaky tanàna maro niainga tany Vangaindrano. Randrianarison Maurice na « Zoto » mivady, dia avy any Vangaindrano fa monina any Antsiranana.
Fahatsiarovana ny antsoina hoe tolom-panafahana 1972 moa ity anio ity. Azo lazaina ho niatomboka tamin’izany fotoana izany ny noheverina fa tena
Mpitatitra ao Fianarantsoa Manome 72 ora ny fanjakana hikaroham-bahaolana
Efa ho roa volana izao no tsy afaka niasa intsony ireo mpitatitra amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly ao Fianarantsoa.
Aretina Dengue- Mahajanga Tafiakatra 1 212 ireo tranga voamarina
Mandripaka tanteraka ny aretina Dengue amin` izao fotoana izao. Miha-mavesatra ny tarehimarika teo anelanelan` ny 04 may hatramin` ny 10 may lasa teo satria tafiakatra 1 212 trangan'aretina Dengue voamarina.
Fambolena ara-biolojika Famporisihana ireo tantsaha hiditra amin’ny sehatra matihanina
Notanterahan’ny solombavambahoaka omaly ny fandinihana sy fandaniana ny Volavolan-dalana laharana 010/2019 tamin’ny 28 novambra 2019 mikasika ny famokarana ara-biolojika (agriculture biologique) eto Madagasikara.
Sehatra harena an-kibon’ny tany Azo ianteherana aorian’ny krizy
Nanamafy ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Fidiniavo Ravokatra nandritra ny fihaonana tamin’ireo orinasa lehibe sy ireo mpandraharaha Malagasy
Fanadinam-panjakana Hisy vaomiera manokana handinika ny daty
Hisy ny "commission spéciale" handinika ny daty mety tokony hanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC araka ny fanazavan'ny Ministry ny fanambeazam-pirenena, Rijasoa Andriamanana.
67 HA Tratra ilay lehilahy mpanendaka vehivavy
Lehilahy 19 taona indray no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria boriborintany fahafito etsy 67 Ha ny alatsinainy,
Kidnapping Votsotra i Anil Karim
Votsotra omaly takariva ilay karana Anil Karim izay nisy naka an-keriny teny Ambatobe ny 28 aprily, raha ny loharanom-baovao avy amin'ny mpitandro filaminana.
Tapitra ny fizarana vatsy tsinjo Mponina 295 000 no nisitraka izany
Tapitra tanteraka ny fizarana vatsy tsinjo, araka ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny mponina. 295 000 ireo mponina nisitraka izany, ka 225 000
Miantso vonjy Amboasary Atsimo Lafo ny vary, lasa mora ny omby
Tafiakatra 700 Ar ny kapoakan’ny vary any Amboasary Atsimo amin’izao fotoana izao, raha 500 Ar teo aloha.
Dr Kolo Roger “Misy kasinga feno otrikaina ny CVO”
Nanao antso miantefa amin’izao tontolo izao omaly ny loholona sady mpitsabo, ny Dr Kolo Roger, fa misy amin’ireo fanafody hafa izay nisy fiantraikany
Holafitry ny mpanao gazety Nanamafy fa malalaka ny fivezivezen’ny mpanao gazety
Taorian’ny fepetra vaovao nivoaka momba ny fifamoivoizana ampiharina nanomboka ny 11 mey 2020 teo dia nanamafy omaly ny avy eo anivon’ny olafitry ny mpanao gazety, tarihin’ny filohany,
Loholona manohana ny fitondrana Mampirisika mafy amin’ny fisotroana CVO
Areti-mandoza eran-tany ny COVID 19 ary vao isika malagasy no nahita fanefitra mahomby aminy satria mbola tsy nisy teto hatreto namoy ny ainy, hoy ireo loholona manohana ny fitondrana, omaly, nampirisika mafy amin’ny fisotroana CVO tetsy amin’ny Motel Anosy omaly.
Covid-19 any Toamasina Mpiasan’ny fahasalamana 4 lasibatra
Mpiasan’ny fahasalamana miisa 4 no tratry ny coronavirus ao Toamasina. Teo amin’ny sakana ara-pahasalamana no nahavoa ny iray.
Fitantanana ny volabe hiatrehana ny Covid-19 Nanakiana mafy ny fitondrana ireo firaisamonim-pirenena
Nampiaka-peo ireo fikambanana mivondrona ao anaty firaisamonim-pirenena manoloana ny fitantanana tsy mangarahara eto amin’ny firenena amin’izao krizy ara-pahasalamana izao.
Sekoly FJKM Maro ireo nampiato ny fampianarana
Mitombo isa hatrany ireo olona mitondra ny tsimok’aretina coronavirus eto amintsika.
Jean Jacques Ratsietison Atsaharo ny fihibohana raha tena mahomby ny CVO
Rehefa maraina eto Madagasikara dia miaina ohatran’ny andavanandro, mifanitsa-kitro, mifampitakosona, ka miparitaka io izany rehefa maraina ka tsy misy dikany ny fihibohana, hoy ny mpahay toekarena Jean Jacques Ratsietison.